Ogaden News Agency (ONA) – Warsaxafadeed ku saabsan shirkii Hawl-wadeenka JWXO
Warsaxafadeed ku saabsan shirkii Hawl-wadeenka JWXO
Waxaa dalka Garmeyn magaalda Frankfurt lagu qabtay Taariikhdu markey ahayd 22-24ka April 2011 shir ey ka soo qeeyb galeen hoowlwadeenada Jabhada ee Qaarada Yurub, Ururada bulshada iyo Hogaanka sare ee JWXO.
Waxaa shirkaa gudoominayay gudoomiyaha Jabhadda Admiral Maxamed Cumar Cusmaan. Shirkaas oo ku soo beegmay marxalad kala guur ah oo halganka shacabka Soomaalida Ogaadeenya uu xoogeystay cadowguna burbur qarka u saaran yahay is la markaana Bariga Dhexe iyo Africa ay ka socdaan isbadalo taariikhi ah oo horseedaya aayo ka talinta shucuubta dulman.
Waxaa shirka si qoto dheer loogu falan qeeyay marxaladaha halganka xaqa ah ee Shacabka Ogaadeenya uu marayo iyo sidii fursadaha jira looga faa’ideysan lahaa loogana gaashaaman lahaa qataraha soo foodsa.
Waxaa si weeyn la isula qiray adkeeysiga iyo geesinimada shacabka Soomaalida Ogaadeenya oo u dhabar adeegay ciribtirka iyo xasuuqa bahalnimada ah ee taliska dhiigyacabka wayaanaha ee itoobiya xukuma iyo in hanashada guusha kama danbeeysta ah iyagu leeyihiin.
Sidoo kale waxuu shirku si weeyn u bogaadiyay kaalinta lama ilaawaanka ah ee xoreeynta dalka hooyo uu kaga jiro ciidanka geesiga ah ee Jabhada Xoreeynta Ogaadeenya kaas oo muquuniyay kagana gacan sareeya goobaha dagaalka ciidanka naf la caariga ee gumeeysiga Itoobiya.
Waxaa shirka si qoto dheer loogu falanqeeyay go’aanadii ka soo baxay kalfadhigii 5aad ee Golaha Dhexe iyo qaabkii loo fulin lahaa, talooyinkii ey soo jeediyeen hoowlwadeenada iyo ururada bulshadu, isbadalada taariikhiga ah ee ka dhacaya Africa iyo Bariga Dhexe, kacdoonka shucuubta Itoobiya iyo sidii la isaga baheeysan lahaa ridida taliska macangaga ah ee wayaanaha iyo xaaladaha Soomaaliya iyo Djibouti.
Ka dib markii shirku si qoto dheer u falan qeeyay qodabadii la soo hordhigay wuxuu go’aansaday:
1) In halganka xaqa ah ee Shacabka S. Ogaadeenya lagu xoreeynayo la sii xoojiyo.
2) In sida ugn dhaqso badan loo hoowlgalo fulinta go’aanadii kalfadhgii 5aad ee Golaha Dhexe.
3) In la xoojiyo iskaashiga lala leeyahay shucuubta iyo ururada ka soo horjeeda talista itoobiya eegadan.
4) In si buuxda laga faa’ideeysto kacdoonada iyo isbadalada ka dhacaya dunida dacaladeeda.
5) In la fashiliyo siyaasada cusub qar is ka tuurka ah ee wajiyada badan oo uu adeegsanayo taliska gumeeysiga gude iyo dibadba.
6) In lasii xoojiyo siyaasada furfuran ee arimaha dibada lagana midha dhaliyo guullaha joogtada ah.
Waxuu shirku cambaaraynayaa:
1) Siyaasada ku talo galka ah ee maamulka gumeeystaha ah ee uu horseedka u yahay kalitaliye Melez zenawi ee ku saleeysan isir sifeeynta, gumaadka, barakicinta iyo kutumashada xuquuqda insaanka S. Ogaadeeniya.
2) shirkadaha shidaalka baara sida African Oil, South West Energy iwm ee ka ganacsanaya dhiiga S. Ogaadeenya iyagoo maalgalinaya siyaasada gumaadka iyo isir baab’inta itoobiya ka wado Ogaadeenya.
3) Talista dictatooriga ah ee Djibouti, maamul goboleedyada daba dhilifka ah ee Garoowe iyo Hargeeysa ee u adeegaya gumeeysiga itoobiya kuwaas oo cadawga u gacan galinaya shacab Soomaaliyeed oo walaaloahooda aan waxba galabsan .
Shirku wuxuu ugu baaqayaa
1) dhamaan shacabka Ogaadeenya xoojinta midnimadooda iyo ka feejignaanta dabinada iyo qorsha dhagareedyada cadawga.
2) Umada iyo shacabka Soomaaliyeed in ey soo ceshadaan midnamadooda, karaamadooda iyo qaranimadooda kana galgishaan faragalinta gumeeysiga ee itoobiya ku hayaan arimahooda gudaha.
3) Qaramada Midoobay in ey fuliyaan waajibka ka saaran in ey fara galiyaan gumaadka, barakicinta iyo cunaqabateeynta habeeysan ee itoobiya ku heeyso shacbiga Ogaadeenya ee ay xog ogaalka u yihiin.
4) Wadamada deeqda bixiya in ey joojiyaan deeqda ey siiyaan taliska itoobiya taas oo qeeyb ka ah hubka lagu gumaadayo shacbka dulman ee Ogaadeenya.
5) Mujtamaca caalamka in ey kaalmo dag dag ah la gaaraan shacabka S. Ogaadeenya ee sida adag u saameeysay abaarta ay u dhamaanayaan dad iyo duunyaba taasoo si ula kaca ah taliska itoobiya uga qarineeyso indhaha caalamka.
6) Shucuubta itoobiya in ey is ka kaashadaan is ka dulqaadka talista danbiilaha ah is la markaana aanay ka qeeyb galin gumaadka shacabka S. Ogaadeenya iyo shucuubta kale ee itoobiya.
JWXO / Frankfurt, Germany.